Laptọọpụ ihe nrụpụta Ryzen 5 kacha mma nke 2022: Kedu onye ị ga-ahọrọ?
Ọ bụrụ na ị na-achọ kọmpụta nwere ezigbo ọnụ ahịa arụmọrụ, yabụ otu n'ime nhọrọ kacha mma ị nwere n'aka gị bụ ịzụrụ kọmpụta. ryzen 5 laptọọpụ.
Na nke a, ị ga-enwe SUV n'ihe gbasara ojiji o kwere omume na ị nwere ike inye ya, na-enweghị itinye ego buru ibu na ya. Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ kacha mma maka ọtụtụ ndị ọrụ yana maka ezinụlọ ndị na-ekerịta laptọọpụ.
1 Laptọọpụ Ryzen 5 kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ Ryzen 5 kacha mma
3 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ Ryzen 5?
4 Ryzen 5 ma ọ bụ Intel?
5 Ryzen 5 ma ọ bụ Ryzen 7?
6 Laptọọpụ Ryzen 5 inch 14 na 16GB nke RAM, nhazi ọkacha mmasị
7 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Ryzen 5 dị ọnụ ala
8 Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Ryzen 5 dị ọnụ ala?
Laptọọpụ Ryzen 5 kacha mma
LAPTOP HP 15S-EQ2103NS ...
Lenovo LAPTOP 15,6 ...
Ụdị laptọọpụ Ryzen 5 kacha mma
Ọ bụghị ha niile Ụdị laptọọpụ Ryzen 5 Ha nhata. Ọ bụghị naanị n'ihi njirimara nke ụdị ya, kamakwa n'ihi àgwà nke onye ọ bụla n'ime ha, ebe ọ bụ na mgbakọ na njikwa mma nwere ike ịdịgasị iche site na ibe ya, na ọbụna n'ime ụdị nke otu ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịdị iche. Ma nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ ODM dị iche (Original Design Manufacturer) ma ọ bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ya, ya bụ, ụlọ ọrụ na-emepụta ma na-emepụta laptọọpụ ndị a na-ere ahịa dị ka ndị a:
Onye nkesa China a na-enye nnukwu uru maka ego, na ụfọdụ n'ezie pụtara atụmatụ na ị na-ahụ naanị na ụfọdụ adịchaghị akụrụngwa, ma dị ọnụ ala. Ha niile nwere ahụmịhe dị ukwuu, ebe ha nwere ihe nketa niile ketara na ngalaba IBM ThinkPad ha nwetara.
Ọzọkwa, onyinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị, na ụdị nhazi ngwaike dị iche iche iji gboo mkpa niile. Ikekwe nnukwu ihe ndọghachi azụ nke ika a bụ crapware, mmemme ndị etinyegoro na mbụ na-ewe iwe mgbe ụfọdụ.
Ị ga-ahụ ụdị dị ka ThinkPad na Thinkbook, Ezubere maka gburugburu azụmahịa. Ma ọ bụ ahịrị Yoga ya iji nye oke ngagharị, iburu ha mgbe niile n'ebe ọ bụla ị na-aga. Ị nwekwara IdeaPad ha, emebere maka ọtụtụ ndị ọrụ, ma ọ bụ Legion, maka ihe na-achọsi ike, dị ka ndị egwuregwu na ndị na-anụ ọkụ n'obi chọrọ mgbakwunye.
Ọ bụ ihe ọzọ nke ndị na-ekesa akụrụngwa, yana Acer, bụ abụọ nke kacha ere nke akwụkwọ ndetu na ụwa, na-ahapụ Lenovo na nke atọ. Ma ha enwetala nke a n'ọnọdụ inye teknụzụ ọhụrụ, atụmatụ mara mma, na ụdị dịgasị iche iche iji gboo mkpa onye ọrụ niile.
HP dị mkpa 255 G8 isi awọ,...
Aka na ụdị dị ka anyaụfụ na Specter, maka ndị na-achọkwu kọmpat nha, slimmer, na nwere nnukwu ngagharị. Ị ga-ahụkwa Akwụkwọ ndetu HP dị ka Pavillions, nke ezubere maka ọtụtụ ndị ọrụ, ịbụ ọkacha mmasị nke ọtụtụ. Ma ọ bụ Elitebook ha na ProBook, ezubere maka azụmaahịa, na-elekwasị anya n'inye nchekwa, ịdịmma na ntụkwasị obi ka ukwuu. Yana Omen ha, maka ndị egwuregwu.
Onye na-emepụta Taiwanese ASUS bụ onye isi ụwa ọzọ. A na-ekwu na ọ nwere kacha mma motherboards, ngalaba ebe ọ na-eji aka ígwè na-achịkwa, mana ọ na-arụpụtakwa laptọọpụ Ryzen 5 nke ya nke ọ na-eji nne nne ya na-akwado ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ kọmputa nwere ezigbo "obi", Asus bụ ụlọ ọrụ ị na-achọ.
N'ime ika i gha ahu ụdị dị iche iche, dị ka TUF, raara nye ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị egwuregwu; VivoBok, maka ndị na-achọ ngwá ọrụ mgbasa ozi dị mma, nke nwere nnukwu ihuenyo, na àgwà ọma maka ọdịyo na vidiyo; yana Zenbooks, nke bụ akwụkwọ ultrabook ha nwere ngagharị na ngbanwe dị egwu.
Nke nta nke nta ọ na-ebili n'ọkwá, ruo mgbe ọ ghọrọ otu n'ime ndị kasị ere ngwá ọrụ. Nke a ika si Taiwan na-apụtakwa maka nnukwu uru maka ego, na a ike dị ịrịba ama, ezigbo akụrụngwa, na na ha ga-anọru gị ogologo oge ma ọ bụrụ na ị na-echekwa ha nke ọma.
Acer Gbasara 3 A315-23 -...
Bata ụdị ha Site na laptọọpụ Ryzen 5 ị nwere ike ịchọta Spin na Swift, nke emebere iji nye njem ka mma, yana ụdị mgbanwe dị n'etiti mbadamba na laptọọpụ, ma ọ bụ Aspire ha, nke bụ usoro ha na-emekarị maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ị nwekwara ike ịhọrọ n'etiti Nitro, maka egwuregwu ma ọ bụ arụmọrụ dị elu. Ebe ị nwere ike lelee akwụkwọ ndetu Acer nke na-ere ugbu a
Ndị ọzọ na-emepụta motherboard bụ ndị na-anwa ịmalite kọmpụta nke ha. MSI, yana ASUS, bụkwa ODM na nrụpụta maka ụdị ndị ọzọ, yana ilekọta mmepụta nke ha. Otu ndị a dị nnọọ mma buenos n'ihe gbasara arụmọrụ, dị nnọọ njikere maka egwuregwu. N'imegide ya, ọ na-eme ka ọ pụta ìhè na ha nwere ike ịnwe nsogbu ndakọrịta ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime na-enweghị Windows ma jiri sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dị ka GNU / Linux.
n'etiti ụdị ha Ị ga-ahụ GT, GS, GE, GP, GL, GF, GV, Alpha na Bravo Series. Ihe nwere ike ime ka mgbagwoju anya, ma nke ahụ dị mfe ịmata ma ọ bụrụ na a maara na GT Series bụ ndị a kara aka na-enye oke arụmọrụ. Ọ bụ ezie na Alfa, Bravo na-eche maka egwuregwu, GT, GP, na GL na-enye arụmọrụ dị elu, GS na GF na-enye nnukwu ngagharị.
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ Ryzen 5?
Ndị nrụpụta Ryzen 5 bụ a isi nso nke AMD, ya bụ, ụfọdụ nhazi nke a kara aka iji gboo mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ. Na mpaghara etiti ahụ nke na-achọghị arụmọrụ dị elu nke Ryzen 7 / Core i7 nwere ike inye, ma ọ bụ na ha enweghị ike imeju mkpa ha site na ntinye ọkwa ọkwa dị ka Core i3 ma ọ bụ Ryzen 3, ma ọ bụ ala.
Ya mere, ọ bụ nhọrọ kacha mma n'ọnọdụ ọ bụla, inwe ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị dị ka ihe nchọgharị ịntanetị, mgbasa ozi, multimedia, automation ọfịs, imewe, na mmemme, na ọbụna maka ntụrụndụ na egwuregwu vidiyo. Ya bụ, akụrụngwa na-apụ apụ nke ga-aga nke ọma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwanrọ ọ bụla ịchọrọ.
Ryzen 5 ma ọ bụ Intel?
Naps na-ala azụ n'etiti ịhọrọ laptọọpụ Ryzen 5 ma ọ bụ Intel, Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ dịghị mfe ikwu nke ka mma. Ọ ga-adị mkpa iji nyochaa uru na ọghọm dị n'ụdị AMD yana ụdị Intel dakọtara. Ihe nhata n'etiti AMD na Intel ga-adabere na ọgbọ. Dịka ọmụmaatụ, Ryzen 5000 Series, ọgbọ nke ise dabere na Zen 3 microarchitecture, ga-abụ ihe nhata nke Intel Core 11000 Series, ya bụ, ọgbọ nke iri na otu.
N'ikwu ya n'ụzọ sara mbara, ụfọdụ ryzen 5 uru n'ihu Intel Core i5 bụ:
Ahịa: AMD na-enwekarị ọnụ ahịa dịtụ ala karịa mgbawa Intel, nke ga-enye gị ohere ịhọrọ ngwaọrụ dị ọnụ ala karịa, ma ọ bụ ngwaọrụ dị elu (dịka: RAM karịa, ikike diski ike ka ukwuu, wdg) maka otu ọnụahịa ahụ.
PCIx 4.0: AMD ibe na-akwadorịrị PCIe 4.0, ebe n'ihe banyere Intel ị ga-edozi maka PCIe 3.0 ruo mgbe ọbịbịa nke Rocket Lake, microarchitecture nke ga-eme ka nkwado obodo maka nkà na ụzụ a.
Ọrụ: Ugbu a AMD bụ otu nzọụkwụ n'ihu Intel, ọ bụghị naanị na arụmọrụ multicore, ha emewokwa ka arụmọrụ otu-isi dịkwuo mma. Na mgbakwunye, ebe ha bụ ụdị chiplet, ha na-enyekarị ọnụ ọgụgụ cores karịa nke Intel monolithic.
Mmepụta ọnụ: N'ihi ụlọ ọrụ TSMC, AMD nwekwara nkà na ụzụ mmepụta ihe dị elu karị, nke pụtara obere oriri, nkwụsị ọkụ na-ebelata, yana ịrụ ọrụ ka mma.
Ryzen 5 ma ọ bụ Ryzen 7?
Laptọọpụ Ryzen 5 nwere ihe nrụpụta nke ya nke mainstream nso, dị ka m kwuru na mbụ. Nke ahụ bụ, ọ ga-abụ nzọụkwụ na-esote mgbe ntinye ọkwa ọkwa (Ryzen 3), na arụmọrụ na HEDT (Ryzen 7 na Ryzen 9 n'otu n'otu). Usoro a dị ntakịrị ọnụ karịa ọkwa ntinye, mana dị ọnụ ala karịa oke arụmọrụ, yana dị ọnụ ala karịa HEDT.
Site n'echiche nke arụ ọrụ Ihe yiri nke ahụ na-emekwa, na nke ahụ bụ na ị ga-enweta arụmọrụ dị elu karịa Ryzen 3 na n'okpuru Ryzen 3. Ya bụ, nhọrọ nke kwesịrị ezuru maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ịmabeghị nke ị chọrọ, ị nwere ike na-eduzi gị site na ihe ngosi ndị a:
Athelon: ha na-enwekarị ihe dị ka cores abụọ, nwere obere ikike. Ụdị nhazi ndị a dị mma maka akụrụngwa bụ isi, ebe ọnụ ahịa dị ala bụ isi ihe kacha mkpa yana maka ngwa nwere oke, dị ka akpaaka ụlọ ọrụ na igodo.
Ryzen 3: ha nwere ike iru 4 cores. Ha dị ọnụ ala, mana ebumnuche ndị ọrụ na-adịghị achọ iji ngwa dị arọ. Ha bara uru maka ikiri vidiyo, ịgagharị n'Intanet, ijikwa ozi, akpaaka ụlọ ọrụ, na ọbụna ụfọdụ egwuregwu vidiyo na-adịghị mma.
Ryzen 5- Ihe ruru cores 6, maka ibu ọrụ dị arọ. Ha nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka ọtụtụ ndị ọrụ, ịnwe laptọọpụ iji mee ngwanro dị iche iche, ọbụlagodi egwuregwu vidiyo.
Ryzen 7- Ihe ruru cores 8, emebere maka ibu ọrụ dị elu, yana arụmọrụ dị elu. Ezubere maka ndị ọkachamara chọrọ ịrụ ọrụ karịa, ndị egwuregwu na ndị na-anụ ọkụ n'obi.
Laptọọpụ Ryzen 5 inch 14 na 16GB nke RAM, nhazi ọkacha mmasị
Otu n'ime ụdị nke ryzen 5 laptọọpụ ọzọ itule nwere nhazi nke 16GB RAM na 14 ”ihuenyo. Ụdị ikike RAM a, yana Ryzen 5, na-enye ndị otu a ọrụ pụrụ iche maka ọtụtụ ngwanrọ yana ọtụtụ egwuregwu vidiyo AAA. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dị ka mkpokọta ma ọ bụ ikwado anya ma ọ bụrụ na ị naghị eji ọtụtụ igwe mebere n'otu oge.
Ọ bụ ezie na ihuenyo Ọ nwere ike ịdị ka ọ dị ntakịrị, ọ bụghị nke dị iche na 15.6 ”otu, mana a na-enweta ya na ịdị arọ, dị mfe, na olu enyere ya ntakịrị ntakịrị, yana oriri, ebe ọ bụ obere panel, ọ ga-eri obere batrị. Ya bụ, ị nwere ike ịtụkwasị obi na ngagharị dị elu na nnwere onwe na-emetụtaghị ngwaike ndị ọzọ.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Ryzen 5 dị ọnụ ala
AMD na-emeri agha ahụ, ihe dị ịtụnanya n'ezie. Oke ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ agbawala, na-emebi mmiri mmiri Intel dị egwu ma na-amanye Chipzilla ime ihe mberede iji belata mmetụta ndị ahụ. N'ihi na, Ọ gaghị esiri gị ike ịchọta laptọọpụ Ryzen 5 n'ụlọ ahịa ntụkwasị obi na-adịbu:
Amazon: nnukwu onye America nwere ọtụtụ ụdị kọmpụta na ụdị dị iche iche. Nnukwu nhọrọ nke ntọala dị iche iche maka ụdị ndị ọrụ niile. Ọnụ ahịa ndị ahụ dịkwa oke asọmpi, inwe ike ịhọrọ n'etiti onyinye dị iche iche nke otu ngwaahịa. N'ezie, ị ga-enwe nkwa mgbe niile nke ikpo okwu a na-enye, ma ọ bụrụ na ị nwere Prime, ọnụahịa mbupu ga-abụ n'efu ma ga-abata ngwa ngwa.
Ụlọikpe Bekee: yinye Spanish nwekwara ngalaba teknụzụ buru ibu ebe ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ụdị laptọọpụ Ryzen 5, n'agbanyeghị na ị gaghị ahụ ụdị onyinye dị otú ahụ dị na Amazon. Ọnụ ahịa ha abụghị nke kacha mma, mana ị nwere ike iji ụfọdụ onyinye na nkwalite nwere ike ime ka ọ dịrị gị mfe karị, dịka Tecnoprices. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ụdị ịzụrụ n'onwe gị ma ọ bụ n'ịntanetị.
nrutu: dị ka ihe na-eme na El Corte Inglés, na nnukwu ngalaba French ọzọ ị nwekwara ike ịzụta n'onwe gị ma ọ bụ n'ịntanetị. Ọ nwere ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, yana ezigbo nhọrọ nke ụdị na ụdị, ọ bụ ezie na ọ dị ala karịa nke Amazon.
Ihe PC: onye nkesa Murcian etinyewokwa onwe ya dị ka otu n'ime ọkacha mmasị maka enyemaka aka ya na ọsọ nke nnyefe. Nkesa a nwere ọtụtụ ụdị na ụdị, yana nnukwu ngwaahịa, ebe ọ nwere ọtụtụ ndị na-eweta ihe na-ere site na ikpo okwu a, dị ka ọ dị na Amazon.
mediamarkt: Agbụ German nwekwara ọnụ ahịa dị ọnụ ala maka laptọọpụ Ryzen 5, yana ụfọdụ ụdị na ụdị kachasị ewu ewu. N'okwu a, ị nwere ike ịtụkwasị obi na ịzụ ahịa n'ịntanetị, ka ezigara ya n'ụlọ gị, ma ọ bụ bịaruo ebe ọ bụla ahịa dị nso nke ha nwere na mpaghara Spanish.
Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Ryzen 5 dị ọnụ ala?
Agbanyeghị na ọ bụ oge dị mma ịzụta laptọọpụ Ryzen 5, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya ngwa ngwa, ọ bụ ezie na enwere oge mgbe ị nwere ike. chekwaa ntakịrị:
Black Friday: Friday ikpeazụ na November bụ Black Friday na laptọọpụ, nke nwere nnukwu mbelata n'ọtụtụ ụlọ ahịa obere, ọkara na nnukwu ụlọ ahịa. Otu ụzọ ị ga-esi nweta pasentị dị elu na ire ere nke ụdị ngwaahịa a, na-eru 20-30% ego n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ụbọchị Mbụ: Ihe omume a bụ naanị maka ndị ahịa nwere akaụntụ Amazon Prime. Ọbụghị naanị na ndị ahịa a adịchaghị enwe mbupu n'efu taa, mana a ga-enye ha azụmaahịa dị oke mma na ụdị ihe niile. A na-atụ anya na afọ a ga-abụ izu mbụ ma ọ bụ nke abụọ nke Julaị.
Cyber ​​Monday- Ọ bụrụ na ị tụfuru Black Friday, ị nwekwara ohere dị mma na Mọnde na-esote. Na Cyber ​​​​Monday na laptọọpụ Ọ bụ oge ọtụtụ ụlọ ahịa na nyiwe ịre ahịa n'ịntanetị na-ebelata ọnụ ahịa ha maka ndị laglọg ndị ahụ na-azụghị Fraịde gara aga.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nhazi » Ryzen 5 Laptọọpụ